Ngaphambili: Thola Ukubukwa Okwabelwana Kokuxhumana Kwakho Kokuthengisa | Martech Zone
Ngaphambili: Thola Ukubukwa Okwabelwana Kokuxhumana Kwakho Kokuthengisa
Ngaphambili yipulatifomu yokuxhumana kwamakhasimende ehlanganisa ama-imeyili, izinhlelo zokusebenza, nozakwabo eqenjini ekubukeni okukodwa. Nge-Front, kulula ukuthi wonke umuntu osenkampanini yakho abe nomthelela kulwazi lwamakhasimende.
I-Front ithanda ukuzicabangela njengendawo yokuxhumana abanamaqembu okuthengisa. Ngazo zonke iziteshi zakho zokufinyelela ezibonakalayo kuthimba lakho lonke ewindini elilodwa eceleni kwe-CRM yakho nezinhlelo zasemuva, i-Front ikusiza ukuvala okuningi, ngokushesha, ukunika amandla ithimba lakho lokuthengisa:
Yakha ukuhamba komsebenzi okuzenzakalelayo ngezixwayiso ezihlakaniphile zokuhlela imikhondo engenayo, uyihambise kumuntu ofanele, futhi ubeke phambili ukufinyelela.
Hlanganyela kwezokuxhumana ngesikhathi sangempela bese ubeka imiyalezo yakho ngempumelelo kakhulu. Qondanisa ngokushesha amasu nokuqukethwe okugcwele.
Bika ngomsebenzi wokuthengisa nesikhathi sokuphendula ukuthola imininingwane odinga ukuyithuthukisa. Nika abanikazi ukuthi baphathe okulindelwe ngakunye kusukela ekugcineni kuye ekugcineni.
Hlanganisa I-Salesforce (noma iyiphi i-CRM) ebhokisini lakho lokungenayo lokuqukethwe okuphelele kutholakale kalula. Faka ukuhlanganiswa okwenziwe ngokwezifiso nama-API avulekile angaphambili.
Izici eziyinhloko zangaphambili
Amabhokisi Okungenayo Eqembu - Ngaphambili kukuvumela ukuthi uhlele amabhokisi wokungenayo weqembu lakho lokuthengisa ngesiteshi, i-tier, i-geography, ukuphuthuma - noma kunjalo, uhlela amathemba akho, i-Front ingakwenza.
Izimpendulo ezihleliwe - Beka njalo unyawo lwakho phambili ngezifanekiso ze-imeyili ezigcinwe ngendlela oyifisayo ezenzelwe amazinga okuphendula aphezulu.
Okusalungiswa okwabiwe - Hlela futhi uhlele ama-imeyili ndawonye ngesikhathi sangempela ukwenza ngcono ukufinyelela kwakho futhi ugweme ukudida ukubuyela emuva nangaphandle kokungakapheli.
amazwana - Xoxa ngokushesha nethimba lakho ngokwesimo se-imeyili ngayinye yokuqondanisa ukuze uhambisane necebo lakho ngaphambi kokufinyelela.
Snuzela - Hlala ugxile kumadili wakho wenani eliphakeme kakhulu ngenkathi ungalokothi uphonsa ibhola ekulandeleni.
Ukufinyelela kwe-CRM - Finyelela i-CRM yakho eduze kwayo yonke imilayezo.
Cela iDemo Langaphambili
Tags: ama-imeyili analyticsisabelo se-imeyiliimibono ye-imeyiliingaphambilii-imeyili eyabiwei-akhawunti eyabiwe ye-imeyiliibhokisi lokungenayo okwabiwe ngalo